VAT Refunds for tourists - isiZulu
SARS Home > Types of Tax > Value Added Tax > VAT Refunds for tourists - isiZulu
​IMALI EBUYAYO NGENTELANTENGO KWAMABHIZINISI ASEMAZWENI
Iyini Imali ebuyayo ngeNtelantengo?
Imali Ebuyayo ngeNtelantengo isho isamba seNtelantengo esasibiziwe, ngo-14%, ngumthengisi sakhokhwa ngumthengi ofanelekile, ngesikhathi ethenga impahla eNingizimu Afrika. Lokhu kuthenga okufanelekile kufanele kwenziwe eNingizimu Afrika ngesikhathi kwenzeka futhi kufanele kube yimpahla ethekelwe eNingizimu Afrika.
Imali ebuyayo ngeNtelantengo izokwenzeka kuphela ekutholweni kwempahla hhayi lapho kungukusebenzelana okungukuthi iNtelantengo engu-14% ebiziwe lapho kusetshenzelwana njengezokuthathu nokuqashiselana ngendawo yokukhosela, konke lokhu akungeni ohlelweni lemali ebuyayo. Ngemininingwane mayelana nokubuyiselwa imali kwabathengisi, cindezela lapha.
Intela Yokungenayo Eyisabelo kanye neNani Lasezimakethe Elivulekile kuzofakwa ekubuyisweni kwemali empahleni ebhalisekayo kanye nenye impahla esisebenza okwesibili, ngeminye imininingwane sicela ubheke uMthetho Wentelantengo.
Ngubani ongafaka isicelo sokubuyiselwa imali ngeNtelantengo?
Umthengi ofanelekile unelungelo lokufaka isicelo sokubuyiselwa imali ngeNtelantengo. Maqondana nalokhu, 'umthengi ofanelekile' ngumuntu ongeyena umthengisi obhalisiwe obalulwe ngokweMithethonqubo Yokuthekela :
Noma yiyiphi -
inhangano yasemhlabeni jikelele esungulwe ngokoMthetho Wokusungula, umthethosisekelo kumbe ishatha ehlose ukukhuthaza ukuthula nokuvikeleka, amalungelo oluntu nawabantu kanye nokuthuthuka komnotho wabantu nezepolitiki kumbe okunezinhloso ezifanayo; kumbe
inhlangano efana nenhlangano eyakhalwe ukangenzi nzuzo kumbe inhlangano yezenhlalakahle ebhaliswe kanjalo ezweni okuthekelwa kulo
futhi esungulwe ezweni elithekelayo ingenzi imisebenzi ethile ngaphakathi eRiphabliki; kumbe
ngezinhlsoso zeNgexnye Yesibili -Isigaba A, umuntu ongemhlali eRiphabliki othenga impahla kumthengisi oseRiphabliki ngenhloso yokuyothengisa leyo mpahla kwabanye abantu abangebahlali kule Riphabliki.
Ngemininingwane mayelana nokubuyiselwa imali ngeNtelantengo kwabathengisi, cindezela lapha.
Ngisifaka kanjani isicelo sokubuyiselwa imali ngeNtelantengo?
umthengi ofanelekile, angafaka isicelo sokubuyiselwa imali ngeNtelantengo ngokuletha isicelo sakhe kuMsingathi Wokubuyiswa Kwemali NgeNtelantengo (PTY) Ltd (i-VRA)
Umthengi ofanelekile lona kufanele adalule impahla kubasebenzi bezemithekelo echwebeni elifanele lezohwebo lokuphuma eNingizimu Afrika. Isiliphu sentela saleyo mpahla engagciniwe njengomthwalo omkhulu kufanele igunyazwe ngumsebenzi wezemithekelo kanye nowe-VRS uma i-VRA ikhona siqu echwebeni lezohwebo. Uma i-VRA ingekho ngesiqu, kufanele isicelo usifake ngokubhalela i-VRA. Bheka uhlu lwamachweba ezohwebo lapha ngezansi.
Ukubuyiselwa kwemali ngeNtelantengo kuzosetshenzwa nini?
Ukubuyiselwa imali ngeNtelantengo kuzosetshenzwa uma lezi zidingo zifeziwe:
Umthengi makube ngumthengi ofanelekile.
Impahla mayithekelwe ezinsukwini ezingama-90 kusukela ngosuku lwesiliphu sentela ngaphansi kwemibandela yokukhulua ethile.
Isamba seNtelantengo edidiyele yayo yonke impahla ethengwe ngesikhathi esithile sokuvakashela e-RSA futhi yathekelwa ekupheleni kwalokho kuvakasha ngumthengi ofanelekile kufanele seve ku-R250 kumthengi ngamunye ofanelekile.
Isicelo sokubuyiselwa imali, ndawonye noshicilelo olufanele, kufanele lufinyelele ku-VRA ezinsukwini ezingama-90 wezinsuku zokuthekela.
Impahla kufanele ibe ngethekelwe ngokudluliswa kwelinye lamacweba ohwebo angama-43 ngumthengi ofanele kumbe umthwali wempahla oqashwe ngumthengi ofanelekile.
Umthengi ofanelekile kufanele alethe lonke ushicilelo olufanelekile okuyilona lona njengobufakazi njengoba kubekiwe kwiNgxenye Yokuqala yeMithethonqubo Yezemithekelo ukuze afakazele ukuba impahla equbulekayo ithekelwe ngomgwaqo, emanzini, emoyeni noma ngojantshi.
Amachweba angama-43 ohwebo yilawa:
Amasango Asebhoda Izikhulumo Zezindiza Zomhlaba Imitata Iziteshi zesitimela
Amazwe ​Amachweba okuhweba
Qaphela: I-VRA iyatholakala siqu kulezi zikhumulo zezindiza zamazwe omhlaba: Cape Town, King Shaka kanye ne-OR Tambo.
Ngingabathinta kanjani ku-VRA?
Imininingwane yokuxhumana neNhloko-hhovisi ye-VRA imi kanje:
Okujwayelekile: [email protected]
Swaziland : swazila[email protected]
Amanye amazwe: [email protected]
Ucingo : + 27 11 979 0055
Isikhahlamezi : +27 11 396 1129
Bheka Umhlahlandlela Wabathengisi i-VAT 404 (Isahluko 12 -Ezemithekelo)
Bheka Umhlahlandlela Wabathengisi i-VAT 404 (Isahluko 5 -Ezemithekelo ngqo nephecile)
Bheka Isaziso SIkahulumeni Nombolo. R.316 'Imithethonqubo Yezemithekelo'
Shayela Isikhungo Sezingcingo sakwaSARS ku 0800 00 72 77 kumbe +27 11 602 2093
Hambela igatsha lakwa-SARS elibuduze nawe.
Last Updated: 25/10/2017 11:25 AM ​